नेपाल भर्सेस युएईः नेपाललाई पहिलो सफलता, बसन्तले लगे विकेट ! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाल भर्सेस युएईः नेपाललाई पहिलो सफलता, बसन्तले लगे विकेट ! [LIVE]
काठमाडौं, भदौ १४ । मलेसिया जारी एसिया कप छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज नेपालले युएईको सामना गर्दैछ । नेपालले आज टस जितेर फिल्डीङ गर्ने निधो गरेको छ । यसैबीच, नेपाललाई पहिलो सफलता मिलेको छ ।
युएइका विस्फोटक ब्याट्सम्यान आश्फीक अहेमद आउट भएका छन् । उनलाई बसन्त रेग्मीले आउट गरेका हुन् । नेपाल आज बुधबार ओमानसँगको नमिठो हारको बदला लिन मैदान उत्रिएकाे छ । नेपालले एसिया कप छनोट हुनका लागि अब सबै खेल जित्नु पर्ने दबाब छ ।
ट्याग्स: Basant Regmi